अनौठो बिश्व Archives - Saitim Khabar
संयुक्त अरब इमिरेट्सकी डा. खावला अल रोमाथीले ३ दिनमा २०८ देशको यात्रा गरि विश्व रेकर्ड राखिन ।
काठमाडौ / संयुक्त अरब इमिरेट्सकी डा. खावला अल रोमाथीले तीन दिनमा २०८ वटा देशको यात्रा गरेर विश्व रेकर्ड कायम गरेकी छन्। उनले ३ दिनमा ७ महादेशका २०८ देशको यात्रा गरेर गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डसमा नाम दर्ता गराएकी हुन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सकी डा. खावला अल रोमाथीले २०८ देशको यात्रा उनले ३ दिन १४ घण्टा ४६ मिनेट ...
डोटिमा ३.८ रेक्टर को भूकम्प गयो
काठमाडौ : डोटी जिल्लाको केआइसिंह गाउँपालिका–१ तिखातर केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले दिएको जानकारी अनुसार आज दिउँसो १ बजेर ६ मिनेटमा तिखातर केन्द्र विन्दु बनाएर ३.८ रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको हो । भूकम्पले डोटीसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्...
बुटवलमा कोरोना विषेश अस्पतालमा दुइजनाको मृत्यु ।
काठमाडौ : बुटवलको कोरोना विषेश अस्थायी अस्पतालमा दुई जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ । उपचारका लागि आइसोलेसनमा भर्ना भएका कपिलवस्तु नगरपालिका वडा नंं. २ तौलिहवाका ४२ वर्षीय कृष्णकुमार गुप्ता र कपिलवस्तुको कृष्णनगरका २५ वर्षीय प्रदीप तेलीको गएराति मृत्यु भएको बताएको छ । गुप्ता २५ गते र तेली साउन २७ गते अस्पतालमा भर...
टिकापुरमा क्रिस्चियनको धर्मगुरु पास्टरले मरेको मान्छे जिउँदो बनाउछु भन्दै मरेको शव घरभित्रै राखियो ।
काठमाडौ : कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा क्रिस्चियनका पास्टर ले मरेको मानिसलाई जिउँदो बनाउछु भन्दै केही दिनदेखि घरभित्रै मरेको शव राखेको खुलेको छ। टिकापुर प्रहरीका अनुसार टीकापुर नगरपालिका–१ शक्तिनगर मुक्त कमैया शिविरका पास्टर दीपक चौधरीले ४३ वर्षीय मोतीराम डगौराको शव घरभित्रै राखेको पत्ता लागेको छ। । उनका छिमेकील...
क्वारेन्टिनमा सुरक्षा गार्ड बसेका एक युवाले आत्मदाहको प्रयास ।
काठमाडौ : रुपन्देहीको देवदह स्थित क्वारेन्टिनमा सुरक्षा गार्ड बसेका एक युवाले आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ७ शित्तलनगर स्थित क्वारेन्टिनमा सुरक्षा गार्ड बसेका २४ वर्षका विपिन बस्यालले शरीरमा मट्टीतेल खन्याएर आफैलाई आगो लगाएका हुन्। मंगलबार बिहान करिब ३ बजेतीर मट्टीतेल खन्याएर आत्मदाह...
खास अयोध्या कहँ हो त ? राम नेपाली पुत्र कि ज्वाइँ ? लोकमणी पाैडेलको खोजमुलक आलेखा ।
नेकपाका नेता कृष्णगोपाल श्रेष्ठले फेसबुक वालमा खास अयोध्या कहँ हो त ? राम नेपाली पुत्र कि ज्वाइँ ? लोकमणी पाैडेलको खोजमुलक आलेखा । यस्तो लेखिएको छ प्रमाण सहित । :- सत्यलाई दबाउने उद्देश्यले जब भ्रमको खेती गरिन्छ र हजारौं पटक उही असत्य लाई दोहोर्याइन्छ भने भ्रम एति बलवान् हुँदै जान्छ कि सत्य बोल्दा पनि कसैले नपत्या...
काठमाडौ : नमस्कार, मेरो नाम सुप्रीया भिटवाल हो, मेरो उमेर २६ वर्ष भयो । मलाई पुरुससँगको सम्भोगमा पुरुष स्खलित हुँदा म उसको विर्य खाने गर्दछु । केटाको विर्य खाँदा मात्रै मलाई यौन आनन्द मिल्छ । डाक्टर साब यसरी विर्य खाँदा कुनै शारिरिक हानी नोक्सानी गर् कि गर्दैन ? साथै यसरी विर्यपान गर्दा महिलाको मोटोपनमा बृद्धि ह...
हेर्नुस प्राचिनकालमा कसरी हुन्थ्यो सेक्स ?
एजेन्सी– वर्तमान समयको हामी जस्तोे सबैलाई ‘सेक्स ट्रेन्ड्स’ अर्थात् यौन प्रथाबारे थाहा नै होला । तर धेरैलाई यो थाहा नहोला कि सेक्सको अनौठो प्रथा शताब्दीऔँ पहिलेदेखि नै चलिरहेको थियो । शताब्दी पहिले सेक्सबारे ७ अनौठो प्रथाहरु थियो । संक्षिप्तमा हेर्नुहोस के थिए ति ७ अनौठो प्रथाहरु – १. लिपिस्टक र ओरल सेक्स प्राची...
के कुनै मानिस दिसा नगरीकन बढीमा एक हप्तासम्म बस्न सक्ला ? यो सोच्नै पनि गाह्रो हुन्छ । तर यहाँ एकजना मानिस चाहि १३ वर्षसम्म दिसा नगरीकन बाँचे । यो घटना अमेरिकाको हो । अहिले ती मानिसको आन्द्रा अमेरिकाको फिलाडेल्फियास्थित मुटर संग्रहालयमा राखिएको छ । कसैलाई पनि पत्यार लागेको थिएन की आखिर कुनै व्यक्ति १३ वर्षसम्म दिसा न...
भगवानलाई एकसे एक महंगा उपहार चढाएको त सुनिएकै थियो । नगद पैसादेखि गहना र कपडा तथा बहुमूल्य सजावटका सामानहरु समेत मानिसले भगवानलाई चढाउँछन् । तर यहाँ एकजना मानिसलाई भगवानलाई जे चढाएका छन् त्यो अहिलेसम्मकै नौलो छ । हालै भारतमा एकजना व्यक्तिले मन्दिरमा भगवानलाई जे चिज चढाए त्यसले सबैलाई छक्क पार्‍यो । भारतको विजय...
ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा हाल्ने पोर्न स्टार डेनियल्सको घोषणा
अमेरिकी पोर्न स्टार स्टर्मी डेनियल्सले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पविरुद्ध मुद्दा हाल्ने भएकी छन् । उनका अनुसार सन् २००६ को सुरुअातमा उनको ट्रम्पसँग अफेयर थियो । तर, ट्रम्पले यो अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले २०१० मा लुइसियानामा सिनेट पदको चुनाव लडेकी थिइन् तर, आफ्नो उम्मेदवारीलाई गम्भीर रुपमा नलिएको भन्दै नाम फिर्ता लिइ...
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एक डकुमेन्ट्री फिल्ममा भनेका छन् कि उनले एक यात्री विमान खसाल्ने आदेश दिएका थिए । किनकी उनलाई खबर थियो-विमानमा बम छ र २०१४ को सोची विन्टर ओलम्पिकमा आक्रमण हुँदैछ । यो दुई घन्टाको डकुमेन्ट्रीको अनलाइन रिजिल भएको छ । जसमा राष्ट्रपति पुटिनले भनेका छन्, ‘खेल सुरु हुनु अघि नै थाहा भयो कि ...